रोचक Archives - नागरिक रैबार
पत्ता लाग्यो प्लास्टिक खाने कीरा
काठमाडौं: प्लास्टिक खान रुचाउने एक किसिमको लार्भाले फोहोर रिसाइक्लिङ गर्न र प्रदूषण घटाउन सघाउने आशा अनुसन्धानकर्ताहरूले व्यक्त गरेका छन्। अस्ट्रेलियाका वैज्ञानिकहरूले “सुपरवर्म”को सङ्ज्ञा दिइएको जोफोबास मोरियो नामक एक किसिमको खपटेकीराको लार्भा पोलिस्टाइरीन खाएर बाँच्न सक्ने पत्ता लगाएका हुन्। उनीहरूका अनुसार उक्त लार्भाको पेटमा हुने विशेष प्रकारको एन्जाइम (पाचनरस) ले प्लास्टिक पचाउन सहयोग गर्छ। उक्त अध्ययनमा […]
कुनै पनि भारोत्तोलकले १२९.५ किलोग्राम उचाल्दा गर्व नगर्ने कुरै भएन । तर, एउटा औंलाले उक्त तौल उठाउने कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ? यो बिल्कुल असम्भव लाग्न सक्छ । तर, बेलायतका स्टिभ किलरले यस्तै अपत्यारिलो कार्य गरेका छन् । पेसेवर मार्शल कलाकारले एउटा औँलाले सबैभन्दा भारी सामान उठाउने यसअघिको विश्व कीर्तिमान तोडेका छन् । १० वर्ष पुरानो […]
श्रीमतीले जहिलै चाउचाउ मात्रै खुवाएको आरोपमा सम्बन्धविच्छेद
एजेन्सी: भारतमा चाउचाउकै विषयलाई लिएर एक व्यक्तिले श्रीमतिविरुद्ध सम्बन्धविच्छेदका लागि निवेदन दिएका छन्। दैनिक खानामा चाउचाउ मात्रै दिएपछि उनले श्रीमतीविरुद्ध सो कदम चालेको एउटा अदालतका न्यायाधीशले बताएका छन्। श्रीमतीले ब्रेकफास्ट, लन्च र डिनरमै चाउचाउ बनाउँथिन्। श्रीमतीलाई चाउचाउबाहेक अरु केही पकाउन नजान्दा श्रीमान निराश भएका थिए। त्यसपछि आपसी सहमतिमा दम्पती अलग भएका थिए। ‘दम्पतीले सम्बन्धविच्छेद गर्नुअघि […]
घाँटीमा जिउँदो माछा अड्किएपछि…
काठमाडौंः थाइल्याण्डका एक मानिसको घाँटीमा अड्किएको माछा निकाल्नका लागि आपतकालीन शल्यक्रिया भएको छ। सो माछा पानीबाट उफ्रिएर उनको मुखमा पसेको थियो। थाइल्याण्डको फत्तालुङ प्रान्तमा माछा मार्ने क्रममा अकस्मात एउटा माछा ती व्यक्तिको मुखभित्र पसेको थाई सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। माछा घाँटीभित्र पसेपछि उनी निसासिएका थिए। श्वास फेर्न नसकेपछि घाँटी समाएर अत्तालिएका उनलाई स्थानीयले फथलुङ प्रादेशिक […]
संसारमा यस्ता धेरै व्यक्ति छन् जो आफ्नो अनौठो व्यवहारका कारण चर्चामा आउने गर्छन् । यस्तै एउटा अनौठो घटना जापानबाट आएको छ, जहाँ एक व्यक्तिको कुकुर बन्ने शौखले सबैलाई छक्क पारेको छ । टोको नामका जापानका यी व्यक्ति अहिले कुकुर बनेका छन् । मानिसबाट कुकुर बनेका टोकोले सामाजिक सञ्जालमा एउटा तस्बिर पनि सेयर गरेका छन् । […]
सबैभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुने इतिहास बनाउँदै यो तस्बिर
मान रेको चर्चित तस्बिर ‘ले भियोलो डी’आइंग्र’ ले कुनै लिलामीमा सबैभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुने तस्बिर बनेर नयाँ इतिहास बनाउने देखिएको छ । सन् १९२४ मा अमेरिकी कलाकारले एक महिलाको नग्न शरीरलाई भायोलिनको आकार दिएका थिए । मान रेको यो तस्बिरलाई उनको सबैभन्दा चर्चित कला मानिन्छ । आगामी मेमा गरिने लिलामीमा यसले ५० लाख देखि […]
पानीमाथि पद्‍माशन​ गरेर नेपाली युवाले विश्व कीर्तिमान राख्न सफल भएका छन् । वाग्मती प्रदेशका विकर्ण कुमार श्रेष्ठले १ घण्टा ३० मिनेट लगातार पानीमाथि बसेर शिक्षा सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन गरी वर्ल्ड बुक अफ रेकर्डमा कीर्तिमान दर्ता गराउन सफल भएका हुन् । सोमबार युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले श्रेष्ठलाई वर्ड बुक अफ रेकर्डको प्रमाण पत्र हस्तान्तरण […]
एक ६ महिनाका बालकले वाटर स्किइङमा विश्व कीर्तिमान कायम गरेका छन् । अमेरिकाको राज्य उटाहस्थित लेकर पावेलका रिच हम्फ्रीज सबैभन्दा कम उमेरमा वाटर स्किइङ गर्ने पहिलो बालक बनेका छन् । बालकले स्किइङ गरेको भिडियो सोसल मिडियामा भाइरल भइरहेको छ । यसमा देखिए अनुसार ती बालकले बोटबाट कनेक्टिड आइरन रडलाई बेस्सरी समातिरहेका छन् । यस्तै अर्कोतर्फ […]
एक व्यक्तिलाई पहिलो नजरमा नै एक युवतीसँग प्रेम बस्यो । एक दिनको दोस्ती सम्बन्धमा परिणत भयो उनीहरुले विवाह गरे । यद्यपि, ती व्यक्ति त्यतिबेला चकित परे जब आफूले विवाह गरेकी युवती कुनै बेला चर्चित पोर्न स्टार रहेको थाहा पाए । यो घटना बेलायतको हो । ३४ वर्षकी एमी क्रिस्टोफर्सले २६ वर्षका जोश नाम भएका युवकसँग […]
घना जंगलको बीचमा बच्चा रोएको आवाज सुनियो भने कस्तो प्रतिक्रिया होला ? तर, यस्तो आवाज निकालेर चरा पनि कराउँछ । अष्ट्रेलियाकाो सिड्नीस्थित तारोङगा चिडियाखानामा एउटा यस्तै चरा राखिएको छ । जसले बच्चा रोएको आवाज निकाल्दै कराउँछ । यसको नाम लायरबर्ड हो । मानिसको नक्कल गर्ने भएकाले यसलाई नक्कल गर्ने चरा पनि भनिन्छ । अष्ट्रेलियाको तारोङ्गा […]
थाइल्याण्डमा १ सयभन्दा बढी बाँदरका दुई गुटबीच लडाइँको एक भिडियो बाहिर आएको छ । भिडियोमा बाँदरहरूको ठूलो झुण्ड सडकमा एकआपसमा लडिरहेको देख्न सकिन्छ । यसबीच सडकमा यात्रा गरिरहेका मानिस घण्टौँ जहाँको त्यहीँ रोकिएका थिए । यस ‘ग्याङ फाइट’ का दौरान बाँदरहरूको आवाज यति ठूलो थियो कि मानिसहरु डराएर गाडीभित्र नै लुकेर बसेका थिए । यो […]
मृत्यु जुनसुकै बेला, कुनै पनि रुपमा आउन सक्छ । संसारका कोही पनि व्यक्तिलाई आफ्नो मृत्यु कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने बारे थाहा हुँदैन । आज हामी तपाईंलाई मृत्युसँग जोडिएका १० डरलाग्दा तथ्यबारे बताउँदैछौं जसबारे थाहा पाउँदा तपाईं आश्चर्यमा पर्नुहुनेछ । आफैंलाई खान थाल्छ शरीरः जिउँदो हुँदा हामी जे पनि खान्छौं त्यसलाई पेटमा रहेको इन्जाइमले खाएर […]
एजेन्सी । बाँदर मान्छेको पुर्खा हो भन्ने त सुनिएकै हो । बाँदरका धेरै आनीबानीहरु मान्छेसँग मिल्छन् भन्ने वन्यजन्तुविदहरुको भनाइ छ । बाँदरले पनि मान्छेकै जस्तो हर्कत गर्दछ भन्ने तथ्यलाई हालै एउटा बाँदरले मलेसियामा पुष्टि गरेको छ । मलेसियामा एकजना व्यक्तिले आफ्नो हराएर फेला परेको मोबाइलमा बाँदरको सेल्फी तथा भिडियो रहेको दाबी ग्रेका छन् । २० वर्षका […]
रोचक मानिसबाट कुकुर बन्न १९ लाख खर्च
रोचक डेटिङ जान पूरै गाउँभरी लोडसेडिङ
समाचार घाँटीमा जिउँदो माछा अड्किएपछि…
रोचक पत्ता लाग्यो प्लास्टिक खाने कीरा
रोचक श्रीमतीले जहिलै चाउचाउ मात्रै खुवाएको आरोपमा सम्बन्धविच्छेद
रोचक जसले एउटै औँलाले उचाले १२९.५ किलोग्राम तौल